DF Somalia oo rukhsaddii u diidey dayuurad tikitkeedu rakhiis yahay oo ay Kenya leedahay (Sababta) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DF Somalia oo rukhsaddii u diidey dayuurad tikitkeedu rakhiis yahay oo ay...
DF Somalia oo rukhsaddii u diidey dayuurad tikitkeedu rakhiis yahay oo ay Kenya leedahay (Sababta)
(Nairobi) 21 Feb 2020 – Dayuuradda rakhiista ah ee Jambojet ayaa hakisay qorshe ay ku bilaabi lahayd duullimaad toos ah oo isku xiri lahaa Muqdisho iyo Nairobi, kaddib markii looga dhaartay rukhsad ay subixii ku iman karto.
Dayuuraddan ayaa qorshaynaysey inay kasoo duusho Jomo Kenyatta International Airport aroortii 6am iyadoo Nairobi dib ugu laaban lahayd 9.25am aminta maxalliga ah, si ay fursad ugu hesho inay u rarato meel kale oo gudaha Kenya ah.
“Waxaanu hakad geliney qorshahan si aannu xaalladda u qiimayno,” ayuu yiri Allan Kilavuka, Madax Howlgallada Jambojet.
Dayuuraddan ayaa la sheegay inay DF Somalia u diiddey rukhsad ay subaxda hore ku iman karto Muqdisho kaddib markii ay waaxda Duullimaadyada Rayidka Somalia sheegtay in uu garoonku xilligaa aad u mashquul badan yahay oo aanu boos kale ka banaanayn.
Jambojet ayaa sanadkii hore doonaysey inay duullimaadka Muqdisho bilowdo bishii Nofeembar, yeelkeede waxaa qorshahaa dib loo dhigay ilaa Maarso sanadkan 2020.
Dayuuraddan oo la mid ah noocyada rakhiista ah ee lacagta kursiga uun la iska qaado ee Yurub, Ameerika iyo Koonfur Afrika, ayaa wadda qorshe is ballaarin ah, iyadoo soo iibsatey laba dayuuradood oo qashtii ah oo ah De Havilland Dash 8 – 400, waxayna haatan sanadkii daabushaa rakaab dhan 700,000 oo u kala socda Kenya iyo Uganda.
Waxaa dayuuraddan isla leh qaran sidaha Kenya Airways waxaana la sameeyay 5 sanadood kahor, waxayna sidoo kale doonaysaa inay tagto Kigali, Rwanda.
Lama oga inay dayuuraddani ogolaan doonto inay xilli kale timaado iyo in loo rakaateeyay tikitkeeda rakhiista ah dartii, waase dayuurad anfici lahayd Soomaalida u kala dhoofta Nairobi iyo Muqdisho.
Previous articleNetanyahu oo bilaabay inuu DHIBCO ku raadiyo been uu ka sheegayo arrimaha Xajka
Next articleDHEGEYSO: Haweenay cunug ay dhashay aan 4 sano u CADAYIN oo maxkamad lasoo taagey (Xaaladda ilkaha ilmaha oo halis gaartey)